China Food Grade Sodium hyaluronate ထုတ်လုပ်သူများ နှင့် ရောင်းချသူများ |LI လူငယ်
လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိ hyaluronic acid ၏ပါဝင်မှုသည် 15g ခန့်ရှိပြီး ၎င်းသည် ခန္ဓာကိုယ်ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်၊ အကယ်၍ နို့စို့အရွယ်ခန္ဓာကိုယ်တွင် hyaluronic acid ၏ဆက်စပ်ပါဝင်မှုအား 100% နှင့် အသက် 30,50.60 တွင်နေရာချထားပါက၊ 65%, 45% နှင့် 65% အသီးသီး လျော့ကျသွားသည် ။Hyaluronic acid ပါဝင်မှု လျော့နည်းသွားသဖြင့် အရေပြား၏ ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ဆောင်ချက် အားနည်းလာပြီး အသားအရေ ကြမ်းတမ်းလာပြီး အရေးအကြောင်းများ ပေါ်လာသည်။အခြားတစ်ရှူးများနှင့် ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများတွင် ပါဝင်မှု လျော့နည်းခြင်းသည် အဆစ်အမြစ်ရောင်ခြင်း၊ သွေးလွှတ်ကြောရောဂါ၊ သွေးခုန်နှုန်းချို့ယွင်းခြင်းနှင့် ဦးနှောက်သွေးကြောပိတ်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိ hyaluronic acid သည် စောလွန်းလျှင် အယ်ဇိုင်းမားရောဂါကို ဖြစ်စေသည်။
Sodium Hyaluronate သည် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ hyaluronic acid ပမာဏကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။လူတွေကို အားအင်အပြည့်နဲ့ နုပျိုသန်စွမ်းမှုကို ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ထို့အပြင် Oral Sodium Hyaluronate သည် အရေပြားအရေပြားကို အစိုဓာတ်ထိန်းပေးခြင်းဖြင့် အရေပြားကို အရေပြားအောက်ပိုင်းမှ epidermis အထိ ထိန်းသိမ်းရာတွင် အသုံးဝင်ပါသည်။Sodium Hyaluronate သည် စွဲမက်ဖွယ် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးလည်းဖြစ်သည်။အထူးသဖြင့် သူတို့ရဲ့ ဒူးဆစ်ဒဏ်ရာတွေကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။Sodium Hyaluronate သည် အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ အသားအရည်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် အရိုးအဆစ်များထိန်းသိမ်းမှုအတွက် ကောင်းမွန်သော ဆေးတောင့်များ၊ ဆေးတောင့်များနှင့် ခံတွင်းဖျော်ရည်များကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
လျှောက်လွှာအမျိုးအစား Molecular ရိုက်ရန် အကြံပြုထားသည်။ Aလျှောက်လွှာ
Oသာမန်အစားအစာ ပစ္စည်းများ 800kDa -1200kDa
(အခြားသော မော်လီကျူးအလေးချိန်အကွာအဝေးကို ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အရ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်) ဒိန်ခဲ၊ဂျယ်လီ၊နို့ စတာတွေ၊
Hကျန်းမာသောအစားအစာပစ္စည်းများ တက်ဘလက်များ၊ ဆေးတောင့်များနှင့် ခံတွင်းဖျော်ရည်များ၊ ကော်လာဂျင်၊ ဗီတာမင်များ၊ chondroitin sulfate၊ ဂလူးကိုစမင်းနှင့် အပင်ထုတ်ယူမှုများအပါအဝင် အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ။
Energy အချိုရည်များ Oral solution ၊ အဖျော်ယမကာ စသည်တို့
Test ပစ္စည်းများ Glucuronic အက်ဆစ် Sodium hyaluronate PH(0.1% ရေဖြေရှင်းချက်) Light ပို့လွှတ်ခြင်း။ Loss ကို အခြောက်ခံပါ။
Sညစ်ညမ်းသော ≥44.5% ≥92.0% 6.0～8.0 ≥9၉.၀% ≤10.0%
Test ပစ္စည်းများ ပင်ကိုယ် viscosity Mဆက်စပ်မော်လီကျူးအလေးချိန် အစုလိုက်သိပ်သည်းမှု Tap သိပ်သည်းဆ Pစားဝတ်နေရေး
Sညစ်ညမ်းသော Aအစစ်အမှန်တန်ဖိုးများ Aအစစ်အမှန်တန်ဖိုးများ Aအစစ်အမှန်တန်ဖိုးများ Aအစစ်အမှန်တန်ဖိုးများ 0ဝ.၁%
Test ပစ္စည်းများ Rမီးလောင်မှုတွင်ကျန်ရှိသည်။ Heavy metal (Pb) Aအာရုံခံစားမှု Bသရုပ်ဆောင်
ရေတွက် Molds & Yeast
Sညစ်ညမ်းသော ≤20% ≤10 ppm ≤2ppm, ≤100CFU/g ≤50 CFU/g
Test ပစ္စည်းများ Colibacillus Staphylococcus aureus Salmonella ဘက်တီးရီးယား
1. မျက်နှာအသားအရည်ကျန်းမာရေးကို မြှင့်တင်ပေးပြီး အရေပြားအစိုဓာတ်ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး လူ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်း hyaluronic acid အားဖြည့်ပေးကာ အရေပြား၏ရေဓာတ်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးကာ stratum corneum ကို ပျော့ပျောင်းစေသောကြောင့် အရေပြား elasticity ကို တိုးတက်စေရာတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ အရေးအကြောင်းများကို လျော့ပါးစေပြီး အစိုဓာတ်ထိန်းပေးသည့် တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ၎င်းသည် ထိုးဖောက်မှုအားကောင်းသည့် အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။
Hyaluronic acid သည် လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ synovial fluid ၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ viscoelasticity နှင့် ချောဆီသည် ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားသောအခါတွင် အဆစ်ဖိအားကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။လေ့လာမှုအရ hyaluronic acid နှင့် synovial fluid တွင်ရှိသော peptide နှင့် glycopeptide တို့သည် ချောဆီ၏ အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ အတူတကွ လုပ်ဆောင်ကြသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
3. HA လျော့နည်းခြင်းကြောင့် လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများနှင့် တစ်ရှူးများ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို နှေးကွေးစေခြင်း Hyaluronic acid ၏ ပါဝင်မှုသည် လူ့သန္ဓေသားများတွင် အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီး မွေးပြီးနောက် အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ တဖြည်းဖြည်း လျော့နည်းလာသည်။hyaluronic acid ၏ပါဝင်မှုသည် တူညီသောအသက်အရွယ်တွင်ပင် မတူညီသောလူများနှင့် ကွဲပြားပါသည်။အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါဝေဒနာရှင်များတွင် Hyaluronic acid သည် သိသိသာသာ လျော့နည်းလာပြီး အိုမင်းခြင်း၏ လက္ခဏာများစွာကို ပြသသည်။Oral Sodium Hyaluronate သည် ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများနှင့် တစ်ရှူးများ၏ hyaluronic acid ကို ဖြည့်စွက်ပေးနိုင်သောကြောင့် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို တားဆီးပေးပြီး အသက်ကို တာရှည်ခံရန် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။
ယခင်- Sodium Hyaluronate 1% ဖြေရှင်းချက်
နောက်တစ်ခု: Hydrolyzed Sodium Hyaluronate